အသံ အက်ကွဲတဲ့အခါ | Page5| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အသံ အက်ကွဲကွဲ၊ ရှတတဖြစ်တတ်တဲ့နေ့မျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ခဏတဖြုတ်လောက်ကို အသံ လုံးဝမထွက်တော့တာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အသံကို အရမ်းသုံးလိုက်မိတာ၊ ထိခိုက်မိတာ၊ ပိုးဝင်တာ စတဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အသံအိုး ရောင်နိုင်ပါတယ်။ အသံအိုးအတွင်းမှာ အသံကြိုးလေး ၂ ချောင်း ရှိပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ၊ အရိုးနုတွေကို ဖုံးကာပေးထားတဲ့ အမြှေးပါးလေး ၂ မြွှာပေါ့။ ပုံမှန်ဆိုရင် ဒီအသံကြိုးလေး ၂ ချောင်းဟာ အသာအယာပဲ ဖွင့်လိုက်၊ ပိတ်လိုက်လုပ်နိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု၊ တုန်ခါမှုတွေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ အသံထွက်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အသံအိုး ရောင်ရမ်းတဲ့အခါ အသံကြိုးလေးတွေပါ ရောင်ရမ်းလာတော့တာပေါ့။ ဒီလိုရောင်နေတဲ့အသံကြိုးကို ဖြတ်သွားတဲ့လေတွေကြောင့် အသံက ပုံမှန်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသံက အက်ကွဲကွဲ ရှတတ ဖြစ်လာတာပါ။ တစ်ခါတလေမှာ အသံလုံးဝမထွက်တော့တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသံအိုးရောင်တာဟာ ယာယီဖြစ်နိုင်သလို၊ ရေရှည်ဖြစ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ယာယီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်တာ၊ အသံအသုံးများတာ (အော်တာ၊ သီချင်းဆိုတာ) စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ သိပ်ပြီးတေ့ာ မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ တာရှည်အသံအက်နေရင်တော့ ရောဂါကြီးကြီးမားမားတစ်ခု ရှိနေနိုင်တာမို့ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။
>> အသံအက်ခြင်းကို ကုသဖို့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။
● ရေငွေ့ရှူပါ။ ရေငွေ့ထုတ်စက်ကိုသုံးပြီး အိမ်နဲ့ရုံးခန်းမှာ ရေငွေ့တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ရေနွေးပူပူကို ဇလုံထဲထည့်ပြီး အငွေ့ရှူပေးပါ။
● အသံကို တတ်နိုင်သလောက် ချွေတာပါ။ အကြာကြီး ဒါမှမဟုတ် အသံအကျယ်ကြီး သီချင်းဆိုတာ၊ စကားပြောတာကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ပါ။ လူအများကြီးရှေ့မှာ စကားပြောရမယ်ဆိုရင် မိုင်ခရိုဖုန်းတို့၊ လော်တို့ကိုအသုံးပြုပါ။
● ရေဓာတ် မခန်းခြောက်စေဖို့ အရည်များများ သောက်ပေးပါ။ (ကော်ဖီတို့၊ အရက်တို့ကို ရှောင်ပါ။)
● လည်ချောင်းကို စိုစွတ်အောင် ထားပါ။ ငုံဆေးငုံတာ၊ ဆားရည် ပလုတ်ကျင်းတာ၊ ပီကေဝါးတာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
● ဆေးလိပ်၊ အရက်ရှောင်ပါ။ ဆေးလိပ်ငွေ့တောင် မရှူပါနဲ့။ ဆေးလိပ်၊ အရက်တွေက လည်ချောင်းကို ခြောက်သွေ့စေပြီး အသံကြိုးတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
● လည်ချောင်းရှင်းတာမျိုး ရှောင်ပါ။ အသံကြိုးကို ထပ်ထပ်ပြီး ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။
● နှာစေးပျောက်ဆေးတွေ ရှောင်ပါ။ လည်ချောင်းကို ခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။
● လေသံနဲ့ တိုးတိုးပြောတာကို ရှောင်ပါ။ ပုံမှန်စကားပြောတာထက် အသံပေါ် ဖိအားပိုများပါတယ်။
၂၁.၂.၂ဝ၂၁ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
1. တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ ခန့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အချိန်မရတဲ့အခါ ၁၀ မိနစ်စီ ခွဲခွဲပြီးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာ၊ ယောဂကျင့်တာ၊ ကတာ၊ အားကစားလုပ်တာ၊ ပြေးတာ စတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
2. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာ စားသုံးပေးရပါမယ်။ အစားအစာကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီည...
အူမကြီး ကျန်းမာစေဖို့ နည်းလမ်းများ
၂ဝ.၂.၂ဝ၂၁ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
အခုနောက်ပိုင်းမှာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်း တက်လာသလို အသက်ငယ်ရွယ်သူတွေမှာပါ ဖြစ်ပွားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
>> အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုကနေ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အသီးအရွက်နဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အဆီတွေ စားပါ။